Wordfence Security Plugin - Semalt Expert dia manambara ny fomba hiarovana ny WordPress tranonkala
Ny atidohan'ny aterineto dia nanjary loza mitatao ho an'ny tranonkala e-commerce, mamela ireo tompona tranonkala sy mpandraharaha tsy manana safidy afa-tsy ny fanatsarana ny fiarovana ny tranokalany isak'izay. Na izany aza, ireo mpandraharaha mpikarakara tranonkala Wordfence dia tsy manana antony hanahirana aorian'ny fampidirana Wordfence plugin ao amin'ny sehatry ny varotra an-tserasera.
Wordfence plugin dia manome fiarovana amin'ny aterineto amin'ny aterineto sy fanandramana momba ny analytics. Ity plugin ity dia ahitana valan-dresaka iray feno sy antikitr'ity viriosy ity izay manakona ny fikatsahana ny code maloto, ny fifamoivoizana ary ny fikatsahana hackers amin'ny tranokalanao. Wordfence plugin koa dia manome mpividy sy tompona tranonkala fahafahana hampiasa karazana geoclocker, fandaharam-potoana azo jerena, ary fanamarinana ny tambazotra.
Ny mpampianatra matihanina amin'ny Semalt Digital Services, Julia Vashneva, dia maneho ireo toro-hevitra mahasoa ho anao hiatrehana ilay olana amim-pahombiazana.
Inona no tokony ho fantatra momba Wordfence plugin
Ny Wordfence dia manome ny antsipiriany ny adiresy IP, ny fitantanana ny votoatiny, ary ny fomba fampidirana. Ity Plugins WordPress ity dia tonga amin'ny dikan-teny malalaka sy maimaim-poana. Ny fampiasana ny dikan-teny premium of Wordfence plugin dia manome fahafahana anao hankafy ny fanakanana ny firenena, ny fidirana an-tserasera, ary ny scans.
Ny fametrahana sy fametrahana plugin Wordfence eo amin'ny tranonkalanao dia ny asa mora indrindra nataonao tamin'ny fanentanana nataonao. Ny tompon'ny tranonkala mampiasa ity plugin ity dia afaka manangana ny adiresy mailaka hahazoana fampandrenesana isaky ny mamono ny tsenany. Na dia izany aza, ireo tranonkala voakasik'ireo andry sy bots amin'ny tranonkala dia mety hianjera haingana noho ny imailaka marobe nalefa tao amin'ny tranokala.
Manakana bots sy tranonkala mampiasa ny Wordfence plugin
Ny fikikisana ny botsika sy ny tranonkala dia mety ho asa manjavozavo fa ny botsika dia manohy manova sy manova ny adiresy IP. Mba hisorohana ny botsa sy ny tranonkala dia ataovy fomba fanao mahazatra sy mahomby ny manara-maso ireo bota rehefa manova ny fananana izy ireo.
Ny botsika dia mety ho fientanentanana amin'ny tranokala e-commerce. Araka ny voalaza tetsy aloha, Wordfence plugin dia ahitana singa iray fanakanana firenena. Ny olana dia miseho rehefa manandrana manakana adiresy IP miavaka avy any amin'ny firenena tianao hatao ianao. Isaky ny miditra ao amin'ny kaontinao ianao, dia mitazona ny angon-drakitra ny tahiry. Diniho ny fampiasana plugin Wordfence hanakanana ny botswana sy ny fifamoivoizana anatiny avy amin'ny tranokalanao.
Features fonosana Wordfence plugin
Hatramin'ny namolavola ny Plugin, dia nilaina ny vaovao farany. Vao haingana, Wordfence dia nampiditra fe-potoana fanamafisam-peo mba hanampiana ireo mpividy vaovao hanavao sy hanakana ny fahavoazan'ny fanafihana. Araka ny hevitr'ireo tolo-keviny, ny fandikana amin'ny Wordfence plugin dia mila adiny 24 ora mba hivezivezena iraisam-pirenena.
Wordfence dia noheverina ho toy ny iray amin'ireo sehatra fiarovana tsara indrindra amin'ny tranonkala amin'ny marketing-vontoaty. Diniho ny fametrahana ny Wordfence plugin mba hanamarihana ny fifamoivoizana avy amin'ny bot sy ny asa anatiny. Alohan'ny hahatongavan'ny botsaka ao amin'ny tranonkalanao, tsy maintsy mamakivaky ny CloudFlare izy ireo. Eritrereto ny fampiasana ny Wordfence sy CloudFlare hanakanana bots, code codes, ary ny fifamoivoizana anatiny izay manohina ny tranokala e-commerce Source .